Muqdisho: shalay, maanta iyo berri (Q. 4aad)
Xaaladda Muqdisho iyo dareenka dadweynaha
Laga soo bilaabo markii uu bilowday dagaalku waxaa si buuxda ugu soo noqday magaalada nabadgalyadii ay la'ayd muddada dheer. Ka hadli maayo maalmo uu qarxo dagaal oo ciidanka diriraya iyo shacabka kaleba dhib soo gaaro ee waxaan ka hadlayaa dhibaatadii sida joogtada ah bulshada Muqdisho u haysatay, sida: dhaca, dilka, qafaalka, kufsiga iyo jidgooyada xaafadaha iyo magaalada dhexdeeda tuugadu ka samayn jirtay. Dadku waxay la soo bexeen gawaari cusub oo qurxoon oo aan waardiye iyo hub midna saarnayn, waxaa qofku ku hadlayaa mobile-ka isaga oo maraya dariiqyada, xaafadaha, suuqyada iyo basaska dhexdooda, waxaa dadka iyo gawaariduba soconayaan goor dambe oo habeenkii ah iyaga oo aan wax walwal ah qabin. Waxaa laga yaabaa in dumarku magaalada u baxaan iyaga oo soo labistay dahabkooda, laakiin in la waydiiyo mooyee lama ogaan karo oo way xijaaban yihiin.
Waxaa si cad loo cambaaraynayaa hoggaamiyayaasha isbahaysiga, gaala-raacyada, Maraykanka iyo cid kasta oo laga arko in ay dhankooda u janjeerto. Horay uma dhici jirin in nimankaas lagu dhiirrado. Dadku aad ayay ugu farxsan yihiin jabka isbahaysiga iyo guusha maxaakimta. Waxaa la isugu bishaaraynayaa nabadda, nicmada iyo guusha u soo hoyatay reer Muqdisho. Waxaa aad loo sugi la' yahay daba iska raacinta isbahaysiga. Waxaa aad loo quursanayaa cid kasta oo u hadasha ashahaado la dirirka. Bulshadu waxay hoos u eegaysaa qofkii isku daya inuu fool-xumeeyo maxkamadaha ama dura hadafkooda, ama dhaliila shaqadooda, ama tuhma qasadkooda. Maangaabka ay la noqoto in bulshadu nooshahay 91kii oo isku daya in uu qabyaalad kaalmo ugu raadiyo xubnaha isbahaysiga markiiba waxaa u jawaabaya qofka ugu horreeya ee maqla oo noqon kara walaalki, ina adeerki ama nin ugaba dhaw kan uu hiilka u doonayo.
Dadweynaha reer Muqdisho waxay u hanqal-taagayaan nolol iyo mustaqbal wacan oo ka dambeeya guushaan ay gaareen. Ninka aan jeclayn culimada iyo diinta oo u arka in uu taladooda ku waayayo wax uu heli jiray wuxuu kalsooni ku qabaa in uu ammaan u heli doono naftiisa iyo maalkiisaba. Dhab ahaan kuwa shacabka dhibay iyana way dhibbanaayeen, maxaa yeelay waardiye uma wada samayn karin xaasaskooda, ubadkooda, waalidkood iyo qaraabadooda, sidoo kale si buuxda awood uguma wada difaaci karin danaha ay ku lahaayeen magaalada. Sidaa darteed kuwa diinta iyo ahalkeeda cadawga ku ahi way ku faraxsan yihiin sidaan marka laga eego amniga ay u heleen naftooda, dadkooda iyo maalkooda.
Walwalka iyo cabsida bulshada:
5. In Maraykan iyo xulafadiisu u gacan haadiyaan qaar ka mid ah maxaakimta iyo taageerayaashooda oo lagu isticmaalo siyaasadda karootada iyo usha ( waxaan hoo, oo fuli arrimahaan, haddii kale ushaa kugu dhacaysa) oo naf iyo shaydaanna ku taliyaan: maxaa dhibtaas kuu gaystay? maad waxaagana iska qaadatid, aayarna iska tukatid, illaa Ilaahay dhib ma abuurine!.
8. Maadaama bii'adu tahay mid qabali ah, dadkuna aysan isku hubin in shareecadu si buuxda u hirgali doonto, waxaa qabiil kasta cabsi ka qabaa in qabiilooyinka kale ugu gabbadaan diinta oo magac diimeed lagu dulmiyo.
AKHRI: Qaybta 5aad....